एस.एल.सी मा फेल हुनु जिवनको अन्त्य हैन ! - पुष्पा बस्नेत | Saathi Sanga Manka Kura
Home › Featured Story › एस.एल.सी मा फेल हुनु जिवनको अन्त्य हैन ! - पुष्पा बस्नेत ›
जस्तै, एकचोटि फेल भए, दुइ चोटि फेल भए तर म उठ्न चाहिँ सक्छु भन्ने भयो मलाई । सपना देख्नु ठिक छ तर सपना देख्दैमा त्यसलाई बिपनामा पनि उतार्न सक्नुपर्यो र आफूले मेहनत गर्नुपर्यो । जो मान्छेले धेरै असफलता भोग्छ त्यो मान्छेलाई सफलता प्राप्त गर्न सजिलो छ किनकी मलाई पनि कलेजबाट एक वर्ष निकालिदिएको थियो । निकालिदिएको बेला जे सपना देखेको थिए काम गर्छु भनेर त्यसलाई निरन्तरता दिएर मेहनत पनि गरेँ । मान्छेहरु हुन्छन् आलोचना गर्ने तर आफू ठिक हुनुपर्छ, सारा संसार ठिक हुन्छ । म एस.एल.सी फेल भए, कलेजबाट एक वर्ष निकालिदिए - त्यो समयमा दुःख पाए तर मेरो लागि त्यो सङ्गघर्ष रहेछ भन्ने बुँझे र आज म यो ठाँउमा पुग्नु भनेको त्यस फेलले गर्दा पनि हो र मेहनतको परिणाम थियो ।
म, भाइबहिनीहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने, जीन्दगीमा एस.एल.सी फेल हुँदैमा, कक्षामा राम्रो अंक नल्याउँदैमा हार नखानु होला । फेरि कोशिस गर्नु, कोशिस गर्दैमा केहि जाँदैन तर हामीले जीन्दगीमा हार चाहिँ कहिल्यै खानु हुदैन । मान्छेहरुले परिक्षामा राम्रो नतिजा नआउँदा आत्महत्या गरेको थुप्रै केसहरु पनि आएको छ तर म सोध्न चाहान्छु के त्यही एउटा जाचको असफलताका कारण आफुले पाएको यो अमुल्य जीवन त्याग्ने? अँह ! म त यो मान्दिन म फेरी भन्छु कोशिस गरेर ति मान्छेहरुले कि आफु म पनि केही गर्न सक्छु भनेर देखाउने । तर त्यसको लागि आफ्नो परिवार अभिभावकको पनि उत्तिकै चाहिँ हुनुपर्छ । उहाँहरुको सहयोग बिना गाह्रो चाहिँ हुन्छ ।
अहिले, म मेरो कामलाई नै निरन्तरता दिदैंछु । भविष्यको योजना भनेकै यो संस्थालाई एउटा ठाउँमा पुर-याउनु छ, मेरो जिवनमा पनि असफलता आएको थियो नआएको होइन तर मैले त्यसलाई सामना गर्दै अघि वढेँ र आज यो स्थानमा आइपुगेको छु । सायद त्यतिवेला म फेल भएँ केही गर्न सक्दिन भनेर हार खाएको भए म यहाँ सम्म आइपुग्ने थिइन ।
एस.एल.सी मा विशिष्ट श्रेणी नै ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन, पास भएर जीवनलाई अगाडि लग्नुपर्छ, त्यो नै महत्वपुर्ण हो भन्छु, जाचँमा कति प्रतिशत आयो भन्ने जीवनमा महत्वपुर्ण हुदैन ।
(पुष्पा बस्नेत संगको कुराकानीमा आधारित)